Sarkaal katirsan Booliska 'Puntland' Oo Ku Dhintay Qarax ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo.
Wednesday December 06, 2017 - 10:20:22 in Wararka by Super Admin
Mid kamida saraakiisha sarsare ee maamulka isku magacaabay 'Puntland' ayaa lagu dilay qarax lagula beegsaday Waqooyiga magaalada Gaalkacyo sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Sawir hore qarax ka dhacay Gaalkacyo
Jugta qarax aad u xooggan ayaa saaka laga maqlay agagaarka Madaxtooyada maamulka 'Puntland' ee waqooyiga Gaalkacyo halkaas oo uu ku qarxay gaari uu watay Col. Cali Magafe oo kamid ahaa saraakiisha ammaanka gobolka Mudug.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhax dhacay gaariga waxaana loo badinayaa miino gaariga lagu dhajiyay ay qaraxa sababtay, Cali Magafe ayaa isagoo dhaawac ah loola cararay isbitaalka weyn ee Gaalkacyo balse goor dambe ayuu dhaacwac u dhintay.
Xarakada Al Shabaab ayaa durbadiiba lasoo degdegtay sheegashada mas'uuliyadda qaraxa lagu dilay sarkaalkan katirsan Booliska maamulka gobolka Mudug ee Gaalkacyo, wararka ayaa intaas ku daraya in Col.Magafe uu mar noqday taliyaha Booliska Gaalkacyo.
Ma ahan markii ugu horraysay oo qarax lagu dilo sarkaal uu ka dhaco waqooyiga Magaalada Gaalkacyo, Al Shabaab ayaa dhowr mar sidaan oo kale saraakiil uga dishay maamulka Cabdi Wali Gaas madaxda ka yahay ee 'Puntland'.